निमावि लाईसेन्स परीक्षाको कापी परीक्षण शुरू, कहिले सार्वजनिक हुन्छ नतिजा? - Everest Dainik - News from Nepal
निमावि लाईसेन्स परीक्षाको कापी परीक्षण शुरू, कहिले सार्वजनिक हुन्छ नतिजा?
भक्तपुरः शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यमिक तहको शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) परीक्षाको कापी परीक्षणको काम शुरू गरेको छ ।
१ सय ८० जना परीक्षकले कापी परीक्षणको काम गरिरहेको आयोगका प्रशासकीय प्रमुख बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
लाईसेन्स परीक्षाअन्तर्गत निमाविका लागि ५६ हजार एक सय ४० परीक्षार्थी सहभागी भएको उनले बताए । नतिजा सार्वजनिक हुन भने समय लाग्नेछ ।
ट्याग्स: लाइसेन्स, शिक्षक सेवा आयोग